‘न्यु नर्मल’मा विद्यालय कसरी सञ्‍चालन हुँदै छन् ?:: Naya Nepal
‘न्यु नर्मल’मा विद्यालय कसरी सञ्‍चालन हुँदै छन् ?
नेपालका अधिकांश विद्यार्थी दूरशिक्षा र वैकल्पिक माध्यामबाटै पढ्न बाध्य छन् । तर महामारीबीच पनि विश्वका थुप्रै मुलुकले विद्यालय सञ्‍चालन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । कोभिड-१९ ले विश्व आक्रान्त छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले पूरै विश्वमा नै महिनौंदेखि हलचल मच्चाएको छ । विद्यालयहरू महिनौंदेखि बन्द छन् । बालबालिकादेखि युवायुवती सबै वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली या दूरशिक्षा प्रणालीमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालमा पनि चैत पहिलो सातापछि बन्द भएका विद्यालयहरू भौतिक रुपमा पुन: सञ्‍चालन हुन सकेका छैनन् । नेपालका अधिकांश विद्यार्थी दूरशिक्षा र वैकल्पिक माध्यामबाटै पढ्न विवश छन् । तर महामारीबीच पनि विश्वका थुप्रै मुलुकले विद्यालय सञ्‍चालन गरिरहेका छन् । तर, कसरी ?
विद्यार्थी घरबाट विद्यालय हिँड्नुअगाडि ज्वरो नाप्छन् । नर्मल तापक्रम देखाएपछि विद्यालय आउँछन् । विद्यालयको ढोकामा गार्ड उभिएको हुन्छ । उसले पालैपालो बालबालिकाका हातमा स्यानिटाइजर छर्किन्छ । गेटभित्र पसेपछि स्यानिटाइजर राखेको भाँडामा केही सेकेन्ड विद्यार्थी टेक्छन्, जुत्तामा कुनै किटाणु नहोस् भनेर । यो दृश्य हो ताइवानको विद्यालयको ।
औपचारिक रुपमा कहिल्यै बन्द नभएको ताइवानका विद्यालय जाडो बिदाका रुपमा जम्मा दुई साता मात्र बिदा भएको थियो । फेब्रुअरी २५ देखि नै विद्यार्थी विद्यालय आउन थालेका हुन् ।
चीनसँग भौतिक र आर्थिक रुपमा निकै नजिक सम्बन्ध भए पनि ताइवानका परराष्ट्रमन्त्री जोसेफ उले ताइवानले भाइरसप्रति छिटो प्रतिक्रिया जनाउँदा बच्‍न सफल भएको बताउँछन् । हुन पनि ताइवानले डिसेम्बर ३१ मै वुहानबाट आउने यात्रुलाई विमानस्थलमै जाँच गर्‍यो । संक्रमित व्यक्तिलाई मोबाइल फोनबाट ट्रयाक गरी घरमै बस्‍न प्रेरित गर्‍यो । मास्क र स्यानिटाइजरको उत्पादन बढायो ।
यति मात्र होइन विद्यालय सञ्‍चालन गरेपछि प्रत्येक विद्यालयलाई सरकारले नै मास्क र स्यानिटाइजर नि:शुल्क बाँड्यो । मास्क लगाउन भुलेका विद्यार्थी मास्क लगाउन पटक-पटक सम्झाइरह्‍यो । कक्षाको घण्टीपिच्छे हात धुन विद्यार्थीलाई माइकबाट आह्‍वान गर्‍यो । कक्षाको क्याप्टेनजस्तो प्रत्येक कक्षामा एक विद्यार्थीलाई डिस्इन्फेक्टेड अफिसरको काम दियो ।
कक्षामा पस्‍ने सबै विद्यार्थीलाई उसैले पालैपालो स्यानिटाइजर स्प्रे गर्छ । विद्यार्थीहरू लन्‍च खाने बेलामा टेबलमा पहेंलो प्लास्टिकको डिभाइडर राखेर छुट्टै क्याबिनजस्तो बनाउँदै बस्छन् । यस्तो क्याबिनले केही भए पनि बालबालिकाहरूलाई एक-अर्काबाट दूरी कायम गर्न मद्दत पुगेको छ । यसरी ताइवानका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । ताइवानमा फुलब्राइट इङ्लिस टिचिङ असिस्टेन्टका रुपमा अंग्रेजी विषय पढाइरहेका अमेरिकी नागरिक रविन भन्छन्, “संक्रमितहरू कहाँ-कहाँ र कति संख्यामा छ सरकारलाई थाहा छ । अमेरिकाभन्दा यहाँ सुरक्षित महसुस गर्छु ।”
स्विडेनले १६ वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीलाई कोभिड १९ का बीच अनिवार्य विद्यालयमा पढाइरहेको छ । उसले कोभिड १९ का लागि माध्यमिक तहका कक्षाहरू मार्च १८ देखि जुन १९ सम्म बन्द गर्‍यो । यस्तै, कोभिड १९ ले मृत्युदर १० गुणा बढ्दासमेत विद्यालय बन्द गरेन । न त विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई अनिवार्य मास्क लगाउन भनियो । कमजोर विद्यार्थीका लागि भौतिक कक्षा अनिवार्य रहेको स्विडिस शिक्षकहरूको बुझाइ छ ।
डेनमार्कले मार्च १६ बाट बन्द गरेको विद्यालय ११ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि अप्रिल १५ मा खुलायो । कोभिड १९ बाट थोरै बिरामी मात्र संक्रमित भएकाले डेनमार्कले प्राथमिक तहका बालबालिकालाई सानो समूहमा राखेर विद्यालय सञ्‍चालन गरेको छ । प्रत्येक समूहमा करिब १२ विद्यार्थी राखेर विद्यार्थी विद्यालय आउने निश्‍चित समयदेखि एक्लै खाने र आफ्नै क्षेत्रमा बसेर खेल्न स्थान छुट्याइएको छ । विद्यार्थीहरू ६ फिटको दूरीमा बस्छन् । ब्रेकमा स-सानो समूह बनाएर खेल्छन् । विद्यार्थीलाई घण्टैपिच्छे हात धुन र स्यानिटाइज गर्न लगाइन्छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई मास्क भने अनिवार्य छैन ।
जर्मनका विद्यालयहरू करिब मार्च ३ देखि बन्द भएका थिए भने मे ४ बाट ठूला विद्यार्थीका लागि पुन: खुल्न थालेका हुन् । प्रत्येक विद्यार्थीलाई ऊ बस्‍ने डेस्क निश्‍चित तोकिएको छ ताकि आवश्यकता परेका बेला कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्न सकियोस् । विद्यालय घण्टी छोट्याइएको छ भने अनलाइनमा पनि कक्षाहरू सञ्‍चालन भइरहेको छ । यसले थुप्रै विद्यार्थीले कक्षाकोठा प्रयोग गर्न पाएका छन् । एक कक्षामा १० जना भन्दा बढी राख्‍न नपाइने नियम छ । केही विद्यालयमा प्रत्येक ४ दिनमा विद्यार्थीको कोरोनाभाइरस जाँच गरिन्छ र नेगेटिभ आउने विद्यार्थी विनाफेस मास्क विद्यालय आउन पाउँछन् ।
मार्च ११ मा बन्द भएका नर्वेका विद्यालय अप्रिल २० मा शिशुकक्षा र अप्रिल २७ देखि कक्षा १ देखि ४ सम्म विद्यालय खुलेका छन् । सरकारले एउटा कक्षामा १५ जनाभन्दा बढी राख्‍न नपाउने नियम बनाएको छ । सुरक्षा उपायमा विद्यार्थीको डेस्क प्रत्येक दिन सफा गर्नुपर्नेछ । कति विद्यालयले खेल्ने चउर पनि बाँडेका छन् । कक्षा ५ देखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरू भने बन्द छ ।
मे ११ बाट फ्रान्सका शिशु कक्षा र प्राथमिक तहका कक्षाहरू पुन: सञ्‍चालनमा आएका छन् । मे १८ देखि ११ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका ‘ग्रिन जोन’ समुदायमा संक्रमितदर कम भएका विद्यार्थीको लागि विद्यालय खोलिएको छ । जुन २२ मा १५ देखि १८ वर्षसम्मका लागि विद्यालय खुले । माध्यमिक तहमा कक्षामा विद्यार्थी संख्या घटाइयो भने मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
बेल्जियममा मे १८ बाट विद्यालय खुलेका छन् । शिशु कक्षा जुन २ बाट खुलेका छन् । प्राथमिक कक्षा जुन ८ बाट खुलेका छन् । कक्षाकोठामा १० भन्दा बढी विद्यार्थी राख्‍न पाइँदैन । विद्यार्थी एक दिन बिराएर विद्यालय जान्छन् । यस्तै, सामाजिक दूरी कायम गर्न नसककिने ठाउँमा शिक्षकलाई फेस मास्क अनिवार्य गरिएको छ ।
सामाजिक दूरीको कडा पालना गराउदै स्विट्जरल्यान्‍डमा मे ११ बाट विद्यालय खुले । कति विद्यालयमा कक्षाकोठामा विद्यार्थी संख्या घटाइयो भने सातामा दुई दिन मात्र विद्यालय जाने बनाइयो । डेस्कहरूबीच दूरी कायम गर्नुपर्नेछ भने टेप लगाएरै मार्किङ गरिएको छ । विद्यालय हाताभित्र ठाउँ-ठाउँमा हात धुने साबुन तथा स्यानिटाइजर स्टेसन राखिएका छन् । जुन ८ पछि मात्र कक्षा १० र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि विद्यालय खुलेका छन् ।
जुन १ बाट मात्रै ग्रिसका शिशु र प्राथमिक कक्षा खुलेका थिए । कक्षाकोठामा १५ भन्दा बढी विद्यार्थी राख्‍न नपाउने नियम बन्यो भने डेस्कको दूरी १.५ मिटर राखियो ।
मे महिनाको सुरुवातमै तीन सय मृत्युदर रहेको इजरायलले विद्यालय, रेस्टुराँ र पब्लिक संस्थाहरू एकैसाथ खुलायो । सुरुमा कक्षाकोठामा विद्यार्थी संख्या घटाउन लगाए पनि मे १७ मा हटाइयो । विद्यालय खुलेको दुई सातापछि कोभिड १९ विद्यालयमै १३० संक्रमित फेला परे । जुन ३ पछि विभिन्‍न विद्यालयमा गरी शिक्षक र विद्यार्थीमा २४४ संक्रमित भेटिए । जुन ८ मा ५ हजार दुई सय विद्यालयमा थुप्रै विद्यालय बन्द भए । तर विद्यालय प्रशासन भने खुलै छ । खुलेका विद्यालयमा ७ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थी र शिक्षकलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
मार्च २ मा बन्द भएका जापानका विद्यालय मार्च २४ पछि बन्द नहुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जु आबेले भनेपछि स्थानीय नगरपालिकालाई विद्यालय खोल्न अधिकार दिइयो । विद्यालय खोल्न कक्षाकोठामा झ्याल खुला राख्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको तापक्रम नियमित लिनुपर्ने तथा फेस मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने बनाइयो ।
मेको अन्यतिर दक्षिण कोरिका विद्यालय खुलेका थिए । माध्यमिक तहमा दुई गुणा मात्र विद्यार्थी संख्या विद्यालयमा आउन दिइएको थियो भने शिशु र प्राथमिक तहमा एकतिहाइ मात्र विद्यार्थी उपस्थिति गराइएको थियो । प्लास्टिकको डेस्क डिभाइडर कक्षाकोठा र क्यान्टिनमा राखिएको छ । फेस मास्क अनिवार्य गरिएको छ । खोक्दा बाहुलाले छोपेर गर्न लगाइएको छ । विद्यालय हाता छिर्नुअघि विद्यार्थीको तापक्रम मापन गरिन्छ । एकपटक संक्रमित विद्यार्थी भेटेपछि विद्यार्थी र शिक्षकलाई मास्क लगाई घर पठाएर महामारीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नसमेत लगायो । यसैबीच केही विद्यालय बन्द भए । तर दक्षिण कोरियामा सबै विद्यालय बन्द छैनन् ।
यसैगरी भौतिक दूरी कायम गरी सुरक्षाका उपाय अपनाई भियतनाम र स्कटकल्यान्‍डका विद्यालयहरु पनि सञ्‍चालनमा छन् । स्कटल्यान्‍डले त भौतिक कक्षा र अनलाइन प्रणालीबाट मिश्रित प्रणाली बनाई विद्यालय सञ्‍चालन गरिरहेको छ ।